ESI GBANWEE PASWỌỌDỤ NA MAIL GMAIL - GMAIL - 2019
Ebumnuche nke ederede ederede na DOCX na DOC bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, mana, ọ bụghị mmemme niile nwere ike ịrụ ọrụ na DOC, mepee usoro ọgbara ọhụrụ - DOCX. Ka anyị lee otú e si gbanwee faịlụ site na otu vordovskogo usoro ọzọ.
Ụzọ iji tọghata
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Microsoft, ọ bụ nanị Okwu nwere ike ịrụ ọrụ na DOCX, malite na Okwu 2007, ọ bụghị iji kọwaa ngwa ndị ọzọ mmepe. Ya mere, okwu nke ịtụgharị DOCX ka DOC dị oke. A ga - ekewa ngwọta niile maka nsogbu a n'ime ìgwè atọ:
Iji ntanetị weebụ;
Ojiji nke ngwanrọ maka ntụgharị;
Jiri nhazi okwu nke kwadoro usoro abuo a.
Anyị ga-atụle ụzọ abụọ nke ụzọ dị iche iche dị na isiokwu a.
Usoro 1: Akwụkwọ Nkọwapụta
Ka anyị site n'ịtụle mmegharị omume site na iji ihe ntụgharị ihuenyo AVS nke ụwa dum gbanwee.
Wụgharịa Ihe Nkọwa Ihe
Site na ịpị Nchịkọta Ihe, na otu "Usoro mmepụta" pịa "Na DOC". Pịa "Tinye faịlụ" n'etiti etiti ngwa ngwa.
Enwere nhọrọ iji pịa akara na otu aha na-esote foto dị n'ụdị ihe ịrịba ama. "+" na panel.
I nwekwara ike iji Ctrl + O ma ọ bụ gaa "Njikwa" ma "Tinye faịlụ ...".
Isi mmalite window tinye. Na-agagharị na ebe DOCX dị ma kpọọ ihe ederede a. Pịa "Meghee".
Tụkwasịkwa isi iyi maka nhazi onye ọrụ nwere ike ịdọrọ ma dobe ya "Explorer" na Nchịkọta Ihe.
A ga-egosipụta ọdịnaya nke ihe ahụ site na interface mmemme ahụ. Iji dee ụdị nchekwa data a ga-ezigara, pịa "Nyochaa ...".
Nchịkọta nhọrọ ịmepụta ga-emepe, họrọ nchekwa ebe a gbanwere akwụkwọ DOC ga-adabere, wee pịa "OK".
Ugbu a mgbe ebe "Ogwe mmepụta" adreesị nchekwa nke akwụkwọ a gbanwere edegharị apụtawo, ịnwere ike ịmalite usoro ntọghata site na ịpị "Malite!".
Ngbanwe na ọganihu. Ọganihu ya dị ka pasent.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, igbe dị na-egosipụta na-egosipụta ozi gbasara mmezu nke ọrụ ahụ. Ọzọkwa, a kpaliri gị ịkwaga na ọnọdụ nke ihe a nwetara. Pịa ala "Nchekwa nchekwa".
Ga-amalite "Explorer" ebe ihe nkedo di. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla.
Isi mgbochi nke usoro a bụ na Akwụkwọ Ihe Ntụgharị abụghị ngwá ọrụ n'efu.
Usoro 2: Tọghata Docx ka Doc
Converc Docx na Doc Ntụgharị bụ ọkachamara na-agbanwegharị akwụkwọ na ntụziaka a tụlere na isiokwu a.
Download Docx gbanwee ka Doc
Gbaa ngwa ahụ. Na windo nke gosipụtara, ọ bụrụ na ị na-eji usoro ikpe nke usoro ihe omume ahụ, pịazie "Gbalịa". Ọ bụrụ na ị zụrụ nsụgharị akwụ ụgwọ, tinye koodu ahụ n'ọhịa "Usoro ikikere" ma pịa "Deba aha".
Na ihe omume mmemme mepere emepe, pịa "Tinye Okwu".
Ị nwekwara ike iji usoro ọzọ iji gaa na mgbakwunye nke isi iyi ahụ. Na menu, pịa "Njikwa"na mgbe ahụ "Tinye Okwu Okwu".
Mpido ahụ malitere. "Họrọ Njikwa Okwu". Gaa na mpaghara ebe ahụ, kaa ma pịa "Meghee". Ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ihe n'otu oge.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-egosipụta aha nke ihe a họọrọ na windo isi nke igodo Docx na Doc na ngọngọ ahụ "Aha Njikwa Ozi". Jide n'aka ijide n'aka na edere akara ngosi n'ihu aha akwukwo. Ọ bụrụ na enweghị, dozie ya. Iji họrọ ebe akwụkwọ a gbanwere ga-eziga, pịa "Na-agagharị ...".
Na-emeghe "Chọgharịa nchekwa". Gaa na mpaghara ndekọ mpaghara ebe DOK ga-eziga, lelee ma pịa "OK".
Mgbe igosipụta adreesị ahọrọ n'ọhịa "Ogwe mmepụta" Ị nwere ike ịga n'ihu ịmalite usoro ntọghata. Ọ dịghị mkpa ịkọwa ntụziaka nke ntọghata na ngwa a na-amụ, ebe ọ na-akwado nanị otu ntụziaka. Ya mere, ịmalite usoro ntọghata, pịa "Tọghata".
Mgbe usoro ntughari ahụ gasịrị, windo ga-apụta na ozi ahụ "Ịgbanwe Mgbanwe!". Nke a pụtara na a rụchara ọrụ ahụ nke ọma. Ọ na-anọgide na ịpị bọtịnụ ahụ. "OK". Ị nwere ike ịchọta ihe ọhụrụ DOC ebe ebe adreesị ọrụ na mbụ na-ezo aka. "Ogwe mmepụta".
N'agbanyeghị na usoro a, dị ka nke gara aga, gụnyere itinye usoro ụgwọ, ma, Otú ọ dị, Convert Docx to Doc nwere ike iji ya n'efu n'oge ule.
Usoro 3: LibreOffice
Dịka e kwuru n'elu, ọ bụghị naanị ndị ntụgharị nwere ike ime mgbanwe ahụ na ntụziaka ahụ kpọmkwem, mana ndị nhazi okwu, karịsịa Onye edemede, gụnyere na ngwugwu LibreOffice.
Mwepụta LibreOffice. Pịa "Mepee Njikwa" ma ọ bụ tinye aka Ctrl + O.
Na mgbakwunye, ịnwere ike iji menu site na ịkwaga "Njikwa" ma "Meghee".
A na-arụ ọrụ a na-ahọrọ. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ebuga na faịlụ nke draịvụ ike ebe akwụkwọ DOCX dị. Mgbe ịchọta ihe mmewere, pịa "Meghee".
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọọ ịmepe windo nhọrọ nhọrọ, ị nwere ike ịdọrọ DOCX site na windo ahụ "Explorer" na-amalite ọkara nke LibreOffice.
Ihe ọ bụla ị na - eme (site na ịdọrọ ma ọ bụ mepee windo), ngwa ederede malitere ma gosipụta ọdịnaya nke akwụkwọ DOCX ahọrọ. Ugbu a, ọ ga-adị mkpa ka anyị gbanwee ya na DOC.
Pịa na ihe menu "Njikwa" wee họrọ "Zọpụta Dị ka ...". I nwekwara ike iji Ctrl + Shift + S.
A na-arụ ọrụ windo nchekwa. Gaa na ebe ị ga-etinye akwụkwọ a gbanwere. N'ọhịa "Ụdị Njikwa" họrọ uru "Microsoft Word 97-2003". Na mpaghara "Filename" ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịgbanwe aha nke akwụkwọ ahụ, ma nke a adịghị mkpa. Pịa ala "Chekwa".
Window ga-apụta, na-egosi na usoro a họrọ nwere ike ọ gaghị akwado ụfọdụ ụkpụrụ nke akwụkwọ ugbu a. Ọ bụ n'ezie. Ụfọdụ teknụzụ dị na usoro Ọdịdị "Office" nke Office Office, usoro DOC adịghị akwado. Ma n'ime ọtụtụ ndị ikpe, nke a enwechaghị mmetụta na ọdịnaya nke ihe a gbanwere. Na mgbakwunye, isi iyi ahụ ka ga-anọgide n'otu usoro. Ya mere, nweere onwe gị ka ị pịa "Jiri usoro Microsoft Word 97 - 2003".
Mgbe nke a gasịrị, a gbanwere ọdịnaya ahụ na DOCK. A na-etinye ihe ahụ n'onwe ya ebe adreesị nke onye ọrụ ahụ kwuru na mbụ.
N'adịghị ka ụzọ ndị a kọwara, nhọrọ a maka mgbanwe DOCX na DOC bụ n'efu, ma, ọ dị mwute ikwu na ọ gaghị arụ ọrụ na ntụgharị nke otu, ebe ọ bụ na ị ga-agbanwe ihe ọ bụla n'otu.
Usoro 4: OpenOffice
Ihe nhazi okwu nke ọzọ nke nwere ike ịgbanwere DOCX ka DOC bụ ngwa, nke a na-akpọ Onye edemede, ma gụnyere OpenOffice.
Gbaa ọkpụkpụ mbụ nke Open Office. Pịa na labeelu "Meghee ..." ma ọ bụ tinye aka Ctrl + O.
Ịnwere ike imegharị menu site na ịpị "Njikwa" ma "Meghee".
Nhọrọ windo amalite. Gaa lelee DOCX, lee ma pịa "Meghee".
Dị ka ihe omume gara aga, ọ ga-ekwe omume ịdọrọ ihe n'ime sheba ngwa ahụ n'aka onye njikwa faịlụ.
Ihe omume ndị a na-eduga n'ịchọpụta ọdịnaya nke akwụkwọ MLC na Open Reiter Office shell.
Ugbu a gaa usoro ntughari. Pịa "Njikwa" ma gaa n'ihu "Zọpụta Dị ka ...". Ị nwere ike iji Ctrl + Shift + S.
Ichekwa faịlụ a ga-emepe. Gaa na ebe ịchọrọ ịchekwa DOC. N'ọhịa "Ụdị Njikwa" jide n'aka na ịhọrọ ọnọdụ "Microsoft Word 97/2000 / XP". Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbanwe aha nke akwụkwọ ahụ na "Filename". Ugbu a pịa "Chekwa".
Ihe ịdọ aka ná ntị na-egosi ihe ga-ekwe omume ekwekọghị ekwekọ ụfọdụ nhazi ihe na nchịkọta nhọrọ, yiri nke anyị hụrụ mgbe ị na-arụ ọrụ na LibreOffice. Pịa "Jiri usoro dị ugbu a".
A na-agbanwe faịlụ a na DOC ma a ga-echekwa ya na ndekọ ahụ na onye ọrụ akọwapụtara na windo nchekwa.
Usoro 5: Okwu
Dị ka ọ dị, okwu nhazi ahụ nwere ike ịtọghata DOCX na DOC, nke abụọ n'ime usoro ndị a bụ "nwaafo" - Microsoft Word. Ma na ụzọ ọhụụ ọ pụrụ isi mee nke a na-amalite site na mbipute nke Okwu 2007, na maka nsụgharị mbụ ịkwesịrị itinye oghere pụrụ iche, nke anyị ga-atụle na njedebe nke nkọwa nke usoro ntọghata a.
Gbaa Okwu Microsoft. Pịa na taabụ iji mepee DOCX. "Njikwa".
Mgbe mgbanwe, pịa "Meghee" na akuku aka ekpe nke usoro ihe omume.
Emeghe windo oghere. Ọ dị mkpa ị gaa ebe DOCX a na-ele anya na mgbe e dechara ya, pịa "Meghee".
DOCX ọdịnaya ga-emeghe na Okwu.
Iji tọghata ihe na-emeghe ka DOC, laghachikwa ọzọ na ngalaba. "Njikwa".
Oge a, na-aga na ngalaba aha, pịa ihe dị n'akụkụ aka ekpe "Zọpụta Dị ka".
A ga-arụ ọrụ shell "Ihe Nchedo". Na-agagharị na mpaghara faịlụ faịlụ ebe ịchọrọ ịchekwaa ihe a gbanwere mgbe a rụchara usoro ahụ. Na mpaghara "Ụdị Njikwa" họrọ ọnọdụ "Akwụkwọ 97 - 2003 Akwụkwọ". Aha nke ihe na mpaghara "Filename" onye ọrụ ahụ nwere ike ịgbanwe naanị na uche. Mgbe ịmechara usoro a iji mezue usoro ịchekwa ihe ahụ, pịa bọtịnụ "Chekwa".
A ga-echekwa akwụkwọ ahụ na nchịkọta DOC ma ga-adị na ebe ị kwuru kpọmkwem na windo nchekwa. N'otu oge ahụ, a ga-egosipụta ọdịnaya ya site na Okwu okwu na ọnọdụ dị oke arụmọrụ, ebe ọ bụ na Microsoft na-ewere usoro nchịkọta DOC.
Ugbu a, dịka e kwere ná nkwa, ka anyị kwuo banyere ndị ọrụ na-eji Okwu 2003 ma ọ bụ nsụgharị ndị na-akwadoghị na-arụ ọrụ na DOCX kwesịrị ime. Iji dozie esemokwu nke nnyefe, ọ zuru iji ibudata ma wụnye patch pụrụ iche dịka ngwà ngwà na saịtị weebụ Microsoft. Ị nwere ike ịmụtakwu banyere nke a na isiokwu dị iche.
More: Otu esi emeghe DOCX na MS Word 2003
Mgbe ịmechara manipulations a kọwara na isiokwu ahụ, ị ​​nwere ike ịme DOCX na Okwu 2003 na nsụgharị ndị dị na ụzọ ụzọ. Iji tọghata DOCX na-agba ọsọ DOC, ọ ga-ezu iji mepụta usoro anyị kọwara n'elu maka Okwu 2007 na nsụgharị ọhụrụ. Nke ahụ bụ, site n'ịpị na menu "Zọpụta Dị ka ...", ị ga-achọ imeghe shea azụ nke akwụkwọ ahụ yana, ịhọrọ ụdị faịlụ na windo a "Akwụkwọ Okwu"ịpị bọtịnụ ahụ "Chekwa".
Dịka ị nwere ike ịhụ, ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ achọghị iji ọrụ ịntanetị iji tọghata DOCX na DOC, ma mee usoro a na kọmputa n'ejighi Ịntanetị, ị nwere ike iji usoro mmegharị ma ọ bụ editọ ederede na-arụ ọrụ na ụdị ihe abụọ ahụ. N'ezie, maka otu ntughari, ọ bụrụ na ị nwere Microsoft Okwu na aka, ọ ka mma iji usoro a, nke usoro abụọ ahụ bụ "ala". Ma a kwụrụ ụgwọ Okwu ahụ, ya mere, ndị ọrụ ndị na-achọghị ịzụta ya nwere ike iji ihe analogues n'efu, karịsịa, ndị na-esote na LibreOffice na OpenOffice. Ha adighi adighi nma n'ile a anya na Okwu.
Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ime mgbanwe ntụgharị faịlụ, mgbe ahụ, iji ntụgharị okwu mee ihe ga-eyi ihe siri ike, ebe ọ bụ na ha na-ahapụ gị ịmegharị naanị otu ihe n'otu oge. N'okwu a, ọ ga-abụ ihe dị mma iji usoro mmemme pụrụ iche nke na-akwado ntụziaka a kapịrị ọnụ nke ntọghata ma kwe ka nhazi ọtụtụ ọnụọgụ ihe n'otu oge. Ma, ọ dị mwute ikwu na ndị ntụgharị na-arụ ọrụ na mpaghara ntụgharị nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha niile, na-enweghị otu, akwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ha nwere ike iji n'efu maka oge ikpebi oge.